सफलताको लागि कसरी समयको ब्यबस्थापन गर्ने ? | Success Open University
समयको व्यबस्थापनको बारेमा कुरा गर्दा समय कति गयो भन्ने भन्दा नि समयको कति सदुपयोग भयो ? भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । तपाई ५० वर्ष पुग्नु ठुलो कुरा होइन । ठुलो कुरा त यो हो कि – तपाईले के सफलता हासिल गर्नु भो ? मानौं तपाईले ५० वर्षमा ५० लाख कमाउनु भयो तर कसैले ५ वर्षमा नै ५० लाख कमायो भने यहाँ कमाउने सवालमा तपाईको ५० वर्ष र उसको ५ वर्षको महत्व उत्तिकै हुन्छ ।
समयलाई हामी घडिले नाप्छौँ । समयलाई हामीले सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा, दिन, हप्ता, महिना, वर्ष हुदै शताब्दि जस्ता रुपमा बाडेका छौं । यो केवल हाम्रो सजिलोको लागि हो । यो मापन जहिल्यै एउटै हुन्छ । हामी भन्छौं – मसँग .. यति वर्षको अनुभब छ, मैले यति वर्ष सेवा गरेको छु । मैले जीवनका सबै दिनहरु नि यहि काममा बिताएको छु । हामी यसरी समयको इकाईसँग दाजेर आफुलाई सक्षम ठान्ने दुस्साहश गर्छौँ । तर यसरी हेर्दा त हामीले समय सदुपयोग गरेको होइन आफै बितेको हो । घडिको समयले १० वर्ष कटाउनमा हाम्रो कुनै भुमिका हुन्न । समयको व्यबस्थापनको बारेमा कुरा गर्दा समय कति गयो भन्ने भन्दा नि समयको कति सदुपयोग भयो ? भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । तपाई ५० वर्ष पुग्नु ठुलो कुरा होइन । ठुलो कुरा त यो हो कि – तपाईले के सफलता हासिल गर्नु भो ? मानौं तपाईले ५० वर्षमा ५० लाख कमाउनु भयो तर कसैले ५ वर्षमा नै ५० लाख कमायो भने यहाँ कमाउने सवालमा तपाईको ५० वर्ष र उसको ५ वर्षको महत्व उत्तिकै हुन्छ ।
केहि मान्छेहरु यस्ता हुन्छन – जसले सामान्य मान्छेले १० वर्षमा पाएको सफलतालाई एकै वर्षमा हासिल गर्छन । आखिर यस्तो किन हुन्छ त ? यो सबैको कारण हो समयको ब्यवस्थापन । तपाई जति राम्ररी समयको व्यबस्थापन गर्नु हुन्छ, त्यति नै छिटो सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।
← हरेक बाबुआमा र गुरुले पढ्नै पर्ने – बिस्व चर्चित चिठ्ठि सफलताका १० सुत्र →